ज्याक्लिन र नोरालाई सोधपुछका लागि बोलाइयो ! – Sunaulo Nepal TV
ज्याक्लिन र नोरालाई सोधपुछका लागि बोलाइयो !
२ सय करोड भारतीय रुपैयाँ ठ’गी र फि’रौती मा’मिलामा बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डेज र नोरा फतेहीलाई इन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट (ईडी) ले सोधपुछका लागि बोलाएको छ ।
उक्त मामिलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सं’लग्नहरुलाई ईडीले सो’धपुछ गरिरहेको बताएको छ । सुकेश चन्द्रशेखरले रनबक्सीका पूर्व प्रमोटर शिविन्दर सिंह र मलविन्दर सिंहलाई २ सय करोड रुपैयाँ ठ’गी गरेको आरोप छ । श्रीलंकाली नायिका उनको पत्नी लिना पाउलसँगको स’म्ब’न्धको कारण यस मुद्दामा मु’छिए’की हुन् ।
गत अगस्त २४ मा चेन्नईस्थित लिनाको घरमा छा’पा मा’रे’र एजेन्सीले ८२.५ लाख रकम तथा दर्जनौँ महँगा गाडी ब’राब’द गरेको जनाएको छ । दिल्ली प्रहरीले २ सय करोड रुपैयाँ ठ’गी र फि’रौ’तीको उजुरी दर्ता गरेको आधारमा यो छानबिन अघि बढाइएको बताइएको छ ।
चन्द्रशेखर १७ वर्षको उमेरदेखि अ’परा’धको दुनियाँमा प्रवेश गरेको यो सबै घटनाको मा’स्टर’माइ’न्ड रहेको ई’डीले बताएको छ । उनीविरुद्ध अन्य दर्जनौँ मु’द्दा पनि रहेको छ ।
साढे ७ सय करोड बजेटमा रामायण बन्दै, राम र रावणमा रणबीर र हृतिक
बलिउडमा पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथामा फिल्म बनाउने क्रम बढ्दो छ। पछिल्ला वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने ठूलाठूला लगानीमा पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथामा फिल्म बनेको देख्न सकिन्छ।
यस्तैमा भारतीय फिल्म इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो लगानीमा रामायण बन्ने भएको छ। साढे ७ सय करोड अनुमानित बजेट रहेको फिल्मलाई मधु मंटेनाले निर्माण गर्ने बताइएको छ।
नितेश तिवारीले निर्देशन गर्ने भनिएको फिल्ममा रामको भूमिका रणबीर कपूर र रावणको भूमिका हृतिक रोशनले निर्वाह गर्ने बताइएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार रणबीर र हृतिकलाई समान ७५ करोड पारिश्रमिक दिइने छ।
फिल्मका लागि अन्य कलाकार छनोटको काम भइरहेको छ। अर्को वर्षदेखि फिल्मको छायांकन सुरु गर्ने तयारीमा निर्माण टोली रहको छ। रामायणमै आधारित रहेको अर्को फिल्म आदिपुरुषको निर्माणको काम भइरहेको छ।
जसमा रामको भूमिकामा प्रभास र रावणको भूमिकामा सेफ अलि खान देखिँदै छन्। अर्को वर्ष अगस्तदेखि प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी भइरहेको फिल्मको अनुमानित बजेट ५ सय करोड रहेको छ।
Previous जेलमा शाहरुख पुत्र आर्यनको अवस्था नाजुक, केहि दिनदेखि बिस्कुटको भरमा